The Ab Presents Nepal » कृष्ण सिटौलाले भने – कांग्रेस इन्जिन विनाको गाडी जस्तै भयो!
कृष्ण सिटौलाले भने – कांग्रेस इन्जिन विनाको गाडी जस्तै भयो!
कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले इन्जिन विनाको गाडी जस्तै कांग्रेस बनेको बताए ।
कांग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियानअन्तर्गत मंगलबार मोरङ क्षेत्र नं. १ को आयोजनामा उर्लाबारीमा आयोजित कार्यक्रममा नेता सिटौलाले सो कुरा बताएका हुन् । कांग्रेसलाई चलायमान बनाउन देशभरी जागरण अभियान चलाइरहेको उल्लेख गर्दै अब कांग्रेस इन्जिन विनाको गाडी बन्न नहुने उनले बताए ।मुलुकमा भएका हरेक आन्दोलनमा कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले कांग्रेसलाई चलयमान र सक्रिय बनाउन कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले पार्टी नेतृत्वले भातृ संगठनहरुलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न नसकेको बताए । तरुण दल, नेविसंघ र महिला संघ कुनैपनि भातृ संगठनहरुले राम्रोसँग काम नगरिरहेको नेता सिटौलाको भनाई छ । उनले पार्टीभित्र आपसी बैमनस्यता र र कलह अन्त्य गर्न लाग्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । केन्द्रकृत अधिकार प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म आएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका बारेमा खबरदारी गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले वर्तमान सरकार जनताको नभई कम्युनिष्टको मात्र भएको दाबी गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पार्टीमा मौलाएको गुटगत राजनीतिको अन्त्य नभएसम्म कांग्रेस चलयमान बन्न नसक्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य सिता कार्कीले पार्टीमा गुटगत राजनीतिकका कारण भातृ संगठनहरु कमजोर बनिरहेको उल्लेख गर्दै नेतृत्वले समयमै ध्यान नदिने हो भने कांग्रेस थप संकटमा पर्न सक्ने खतरा रहेको बताइन् । नेताहरु नसच्एिसम्म कांग्रेसले गति लिन नसक्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै, उर्लाबारी–४ का कल्याण राईले गाउँगाउँमा कांग्रेसको जागरण अभियान अघि बढाउनु पर्ने बताए ।
त्यस्तै, नेपाल विद्यार्थी संघका उर्लाबारी बहुमुखी क्याम्पस कमिटीका सभापति सुजित जसवाल र शितल दाहालले नेपाल विद्यार्थी संघलाई निष्कृय बनाउन पार्टीपंक्ति नै लागि परेको आरोप लगाए । उनीहरुले पार्टीको भातृ संगठनहरुलाई सक्रिय बनाउन नेतृत्वले ध्यान दिनु पर्ने बताए ।
त्यस्तै, कांग्रेसका महासमिति सदस्य ललित अधिकारी, शोभा पालुङ्वा, गीता खतिवडा, गोमा नेपाल, उमेश धिमाल, दिपेन्द्र धिमाल, सेमन्त दाहाल, भानुभक्त शर्मा पराजुलीलगायतले बोल्दै कांग्रेस नेतृत्वले गुट–उपगुटमा नलागी जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्बाह गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रम कांग्रेसका मोरङ क्षेत्र नं. १ का क्षेत्रीय सभापति खड्ग फागोको सभापतित्वमा भएको थियो ।